Iran: Tsy Misy Firenena Hitoeran’ny Hazo Tranainy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Aogositra 2017 10:37 GMT
(Marihina fa tamin'ny 19 Novambra 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Efa ho herintaona izao no nanome baiko ny polisy ny manampahefana Iraniana mba hanadio ny firenena amin'ny “fitaomana tandrefana” sy ny “tsy fahamenarana”. Soa ihany fa voatery nijanona antenantenan-dalana izy ireo. Tamin'ity indray mitoraka ity, nitatitra ny bilaogera Iraniana mpiaro ny tontolo iainana sy ny gazety mivoaka isan'andro, Etemaad, fa nisy indray ireo lasibatra vaovao dia ny hazo tranainy izany (jereo ihany koa ny gazety mivoaka isan'andro Amerikana LA Times).
Araka ireo lahatsoratra ireo, nanome baiko ny manampahefana ny hanapahana ireo hazo balsama tranainy am-polony izay efa naharitra roanjato taona mahery ao amin'ny faritanin'i Gilan, any avaratry ny firenena, izany dia noho ny antony mba hiadiana amin'ny finoanoam-poana ao an-toerana. Araka ny fombafomba fahiny, mametraka labozia sy lamba kely eo ambanin'ny hazo ny olona. Toa hita fa nanapa-kevitra ny hamarana ireo fomba amam-panao ireo tamin'ny alàlan'ny fanapahana ireo hazo tranainy ny Minisiteran'ny Fitsarana Iraniana .
Maro ny bilaogera no nizara antserasera ny fahatairany sy ny alahelony manoloana izao baikon'ny fandringanana izao.
Nanoratra i Mohmmad Darvish, mpiaro ny tontolo iainana sady bilaogera fanta-daza Iraniana :
Manana faritry ny ala voafetra ihany i Iran ary tokony hiaro ny hazontsika isika. Anisany ao anatin'ny kolontsaina sy ny fomban-drazantsika ny fikarakarana ireo hazo. Nangataka antsika mba hiaro ny natiora ny razambentsika zoroastres . Nilaza ihany koa ny mpaminany Mohammed fa midika ho mandratra ny elatry ny anjely ny fanakatsahana ny sampan-kazo. Ka noho izany, ahoana no ahasahian’ [ireo manampahefana] manimba ireo hazo tranainy indrindra ao Gilan sady mirehareha momba izany izy ireo… Tsy tsara kokoa ve ny miady amin'ny fototry ny finoanoam-poana noho ny manapaka ireo hazo tsy manantsiny ? Tsy mihevitra ve ianareo fa ireo mangataka ny fanatanterahana ny faniriany manoloana ny hazo dia hanolo izany amin'ny alàlan'ny renirano, ny tendrombohitra, na zavamanan'aina hafa na tsia?
(Ny sarin'ny hazo tranainy etsy ambony eo amin'ny pejy fanombohan'ny lahatsoratra dia navoaka tao amin'ny bilaogin'i Darvish)
Nanoratra i Earth Soldier:
Miori-paka eo amin'ny fiainantsika ny finoanoam-poana, isika no namorona izany, tsy manan-tsiny ireo hazo … Taona vitsivitsy lasa izay, nisy lehilahy roa samy nilaza fa tompon'ny voromailala an-jatony. Nanome baiko ny mpitsara iray fa ho vonoina ireo voromailala an-jatony ireo. Maty ireo vorona tsy manan-tsiny, nefa mino ve ianao fa niravina ny olan'ireo lehilahy roa ireo?
Nilaza ilay bilaogera fa mikasa ny hikapa hazo miisa 40 ny manampahefana. Mihoatra ny roanjato taona ny ankamaroan'izy ireo.
Nanoratra ilay bilaogera Z8tun fa tsy ireo hazo ihany no mitondra finoanoam-poana , fa maro ihany koa ireo manolotra firavaka any amin'ny tempolin'ny fivahiniana masina mba hivaly ny vavak'izy ireo. Nilaza ihany koa izy fa manatitra izay ananany ny mahantra, mba ho sitranina izy ireo na ny iray amin'ny fianakaviany. Malahelo i Z8tun satria ampelatanan'ny olombelona tanteraka ireo hazo.
Araka i Ahang Rabbani ao amin'ny Iranian.com , mbola lasibatry ny tranga hafa ihany koa ireo hazo :
Vao maraina tamin'ny Asabotsy 27 Septambra 2008, nahita ny mpiambina ny fasan'ny bahaïstes tao Isfahan (làlana mankany Nain any amin'ny faritanin'i Yazd) fa notapahana sy nokapakapaina ireo hazo rehetra. Tsikaritra fa aty Iran, na dia ireo hazo akaikin'ny bahaïsma aza – na akaikin'ny mpivavaka ao aminy efa maty – aza dia meloka ho faty